Ihe ịhụ na New Mexico, United States | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | America, United States, General
New Mexico bụ otu n'ime steeti ndị dị na United States nke America na isi obodo ya bu Santa Fe Steeti a bu otu n’ime ndi nwere onu ogugu ndi obodo Hispanic na Ndi America. Ọ bụ ndị Spen chịrị ya ọtụtụ narị afọ gara aga, bụ ndị gụrụ ya aha ahụ na-eche na obodo ndị ahụ metụtara ọdịbendị Mexico. Mgbe e mesịrị ọ bụ akụkụ nke Independent Mexico na n'ikpeazụ United States of America.
Anyị ga-achọpụta ụfọdụ n'ime ihe ịhụ na New Mexico, ọ bụ ezie na anyị na-ekwu maka steeti buru oke ibu, yabụ anyị ga-agharịrị ọtụtụ isi ihe mmasị. Na steeti a, anyị ga-ahụ ụfọdụ obodo na-adọrọ mmasị mana karịa oghere okike niile mara mma.
1 Albuquerque kacha biri
2 Santa Fe, isi obodo ya
3 Ebe obibi Carlsbad
4 Ihe Ncheta Mba nke Aztec Ruins
5 Roswell, na ịchọ UFO
6 Ncheta White Sands National Ncheta
Albuquerque kacha biri
Ọ bụ ezie na ọ bụghị isi obodo gị, Albuquerque bụ obodo kasị ukwuu na New Mexico ma a hụrụ ya n’ọzara dị elu. Obodo ochie ya sitere na narị afọ nke XNUMX ma hiwe ya dịka ógbè ndị Spain. Ebe akụkọ ihe mere eme bụ otu n'ime ebe ndị mara mma, na ụlọ ụlọ ochie na nnukwu ọmarịcha nke na-eme ka ọtụtụ ọdịbendị ndị Spain na ndị obodo. N’obodo, enwere ọtụtụ ntụrụndụ maka ezinụlọ dum. Have ga-aga na Museum of Natural History na Science nke New Mexico ebe ọ na-agwa anyị banyere mmalite nke American Southwest na ihe atụ nke ọkpụkpụ dinosaur. N’ime obodo ahụ, enwekwa oriri ikuku na-ekpo ọkụ na ụlọ ọrụ World Ballon anyị nwere ike ịnwe ohere ịle obodo ahụ site na otu n'ime ikuku ikuku ndị a dị ọkụ. Enwekwara ebe ndi ozo ihu dika ezinulo dika Albuquerque Biological Park, ebe inwere ike ileta ihe di iche iche dika akwarium, ubi botanical ma obu zoo.
Santa Fe, isi obodo ya
Santa Fe bụ isi obodo New Mexico, n'ihi ya, ọ bụ ebe ọzọ kwesịrị ịhụ. Can nwekwara ike ịhụ ụlọ ije na ụlọ adobe. Gbanye Santa Fe anyị nwere ike ịgagharị na veranda Canyon Road, tinyere ụfọdụ narị veranda na ọtụtụ ebe ndebe ihe mgbe ochie. Ọ bụ ebe anyị nwere ike ịga ụdị ebe ndị a ọtụtụ awa. N'ime obodo anyị nwekwara ike ịga Katidral nke San Francisco de Asís, dị iche na katidral ndị Europe. Ihe ọzọ kachasị amasị ndị njem nleta na Santa Fe bụ ịzụ ahịa, ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ ụlọ ahịa nwere ịchọ mma agịga turquoise na kwa ụlọ ahịa nka na nka iji zụta ụdị ihe mbụ niile
Ebe obibi Carlsbad
Este ogige mba dị na ndịda ọwụwa anyanwụ New Mexico, na Sierra de Guadalupe. Emepụtara ogige a iji kpuchido ọgba ndị a bilitere na mmiri Permian na Paleozoic Era. N’ogige ahụ, ọgba dị iche iche ruru 83. Carlsbad Cavern nwere otu n'ime ime ime ala miri emi n'ụwa. N'oge nleta n'ọgba anyị nwere ike ịnụ ụtọ usoro ndị a nke stalagtites na stalagmites. N'aka nke ọzọ, na ogige mba ị nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche dịka ịgagharị ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ígwè.
Ihe Ncheta Mba nke Aztec Ruins
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmatakwu banyere ụmụ amaala oge ochie nke mpaghara ahụ, anyị ga-abịarukwu nso ncheta obodo a. Na ncheta a anyị nwere ike ịhụ ụlọ obibi ọdịnala na ndị Pueblo India. Otu ìgwè ndị America a na-asụ n'America bụ otu n'ime steeti New Mexico. Ọ bụ saịtị dịdebere obodo Aztec ma bụrụkwa akụkụ nke World Heritage Site.
Roswell, na ịchọ UFO
Ọ bụrụ na ị bụ Fans nke extraterrestrial isiokwu ị gaghị agbaghara ọbịbịa Roswell na New Mexico, ebe o doro anya na a hụrụ ọtụtụ UFO, nke bụ okwu acronym nke Unidentified Flying Object, UFO na Bekee. N'ime obodo a, enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye njegharị elekwasịrị anya na isiokwu iji hụ ebe a hụrụ ihe ndị a na-efe efe ma hụ Mpaghara 51. Ha nwekwara International UFO Museum na Research Center ebe anyị nwere ike ịmụ maka isiokwu Deeper.
Ncheta White Sands National Ncheta
Ncheta Ncheta White Sands dị kilomita 25 site na Alamogordo na mpaghara mpaghara Tularosa. Ndị a dị egwu dunes bu gypsum crystals, n'ihi ya mara mma na-acha ọcha na agba. Mpaghara a bụ oke osimiri ọtụtụ nde afọ gara aga mana ọ ghọrọ ọzara aja ọcha anyị na-ahụ taa ekele maka ala ahụ nwere gypsum na mbuze ifufe. Ihe kachasị mma na enweghị mgbagha bụ ọdịdị ala anyị nwere ike ịhụ, nke ghọrọ ihe nkiri. Na mgbakwunye, n'ọzara a anyị nwere ike ịnweta ohere ịhụ onye ama ama n'okporo ụzọ, ụdị nnụnụ dị adị n'ezie. E nwekwara ọtụtụ ụzọ ụkwụ na-eme njem na mpaghara a, ụfọdụ n’ime ha na-erughị otu kilomita, na-eme ka ha daba maka ezinụlọ ahụ dum.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » United States » Ihe ịhụ na New Mexico